लमजुङको आकाशे भीरसँगै रहेको गाइखुरे झरना,एक पल्ट जानेहोइन त ?::देश र जनताप्रति समर्पित
लमजुङको आकाशे भीरसँगै रहेको गाइखुरे झरना,एक पल्ट जानेहोइन त ?
लमजुङ- लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका– १ को आकाशे भीरसँगै रहेको गाइखुरे झरनाले आन्तरिक पर्यटनमा प्रवद्र्धनमा टेवा दिन थालेका छन ।
डुम्रे– बेसीशहर सडक खण्ड अन्तर्गत सडकको पहुँच मार्गसँगै रहेको हुनाले पनि गाईखुरे झरनामा आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको स्थानीयले बताए ।
गाईखुरे झरना मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थलसँगै रहेको छ । मनोरम र शान्त वातावरण छ । क्यानोनिङ गर्न, पौडी खेल्न र नुहाउनका लागि युवा वर्गको लर्को लाग्ने गर्दछ।
खेलमैदान बनाउन जुटे लमजुङ भकुण्डेवासी, बृद्धबृद्धाहरु समेत श्रममा जुटे
लमजुङ गाईखुरे झरनामा प्रथम क्यानोनिङ महोत्सव २०७६ गरिने
लमजुङ–मनाङ आवतजावत म्यार्दीखोला मोटरेवल पुल बगाएपछि सास्ती
नेकपाका लमजुङ जिल्ला हाँक्ने महिला अध्यक्ष मधु,”जसले जनयुद्दमा श्रीमान गुमाए”(पृष्ठभुमि)